के हो रेटिनोब्लास्टोमा ? | Hamro Doctor News
के हो रेटिनोब्लास्टोमा ?
By डा. अमृत आचार्य, आँखा रोग विशेषज्ञ
रेटिनोब्लास्टोमा भनेको बालबालिकामा हुने एक किसिमको आँखाको क्यान्सर हो । यो रोग प्रायः जसो बालबालिकामा मात्रै हुन्छ । यदि बाबुआमामा रेटिनोब्लास्टो छ भने बालबालिकामा देखिने सम्भावना उच्च हुन्छ । तर, कहिले काही बाबुआमामा यस्तो समस्या नभए पनि रेटिनोब्लास्टो देखिन सक्छ ।
विश्वको अन्य देशमा विशेषगरी १८ महिनासम्मका बालबालिकामा यस्तो समस्या देखिदै आएको छ । तर, नेपालमा भने अलि एड्भान्स उमेर समूह वा ३÷४ वर्षसम्मका बालबालिका यस्तो समस्या लिएर आउने गरेका छन् । यो अरु क्यान्सर जस्तो फैलिन्छ ।
आँखाको नानी सेतो भएर आउँछ ।
असामान्य रुपमा आँखा रातो हुनु ।
आँखाको आकार ठुलो हुने ।
आँखा बाङ्गो हुन्छ ।
आँखा नदेख्ने ।
आँखा धेरै दुख्ने ।
पाँच वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकामा यो रोग देखा पर्न सक्छ ।
कसरी पता लगाउने
बाबुआमाले बच्चाको आँखामा सेतो देखेमा ।
बच्चाको आँखाबाट आसु आइरहेमा ।
बच्चाले बिस्तारै आँखा देख्न छाडेमा ।
दृष्टिमा कमी आउन थालेमा ।
बच्चाले दैनिक गर्ने क्रियाकलाप गर्न नखोज्ने ।
आँखारोग विशेषज्ञद्वारा बच्चालाई बेहोश गरी आँखामा पर्दाको जाँच गरी यो रोग पता लागाउन सकिन्छ ।
आँखाको अल्ट्रसाउण्ड, आँखा तथा मस्तिष्कको सिटीस्क्यान, एमआरआई गर्ने ।
यसको मुख्य उपचार भनेको क्यान्सरविरुद्धमा दिइने औषधि नै हो । यस्ता औषधि नशाबाट दिइन्छ जसलाई केमोथेरापी भनिन्छ । जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई केमोथेरापी दिइन्छ । केमोथेरापी आँखाको भित्रका नशामा पनि दिन सकिन्छ ।
बिरामीको अवस्था हेरी रेडियो थेरापी, लेजर, क्रायोथेरापी, किमोथेरापी तथा रेडियोथेरापी गर्ने गरिन्छ । उपचारमा ढिलो भए आँखाको डल्लो नै निकाल्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
क्रायोथेरापी भनेको अत्याधिक चिसो तापक्रम प्रयोग गरी क्यान्सर भएको तन्तुलाई नष्ट गर्ने विधि हो ।
माथिका लक्षण बालबालिका देखिए तुरुन्त विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । उपचारमा ढिला भए बालबालिकाको ज्यानै जाने सम्भावना पनि हुन्छ । तर समयमै उपचार गरे यो रोग पूर्ण निको हुन्छ ।
(डा. आचार्य त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालमा आवद्ध छन् ।)
Last modified on 2018-09-26 19:36:36
Dr. Amrit Acharya